एक खुट्टा गुमाएका युवकको साइकल जिन्दगी: चलायमानमात्र होइन, लिड गर्नेगरी रफ्तारमा यात्रा
1st June 2019, 12:47 pm | १८ जेठ २०७६
यो कथा हो एउटा असाधरण 'युवक'को।
पोट आए युवकले बाजी मार्ने पक्का रहेछ। उनको उत्साह उत्कर्षमा थियो। भेट्न पुगेका हामीलाई समेत वास्ता गरेनन्। यसो एक पटक पुलुक्क ढोकातिर त हेरे तर लगत्तै लुडो बोर्डतिरै घोप्टिहाले। गोटी फाल्ने पालो उनको रहेछ। गोटी समाते, आँखा चिम्म गरेर निहुरिए। छाती र निधारमा पालैपालो छुवाए र बेस्कन हल्लाएर भुईँमा फाले। गोटी कोल्टियो। केही नसोची उठाएर उही प्रक्रिया दोहोर्‍याए। खेल्ने र हेर्ने सबैजना एकसाथ चिच्याए - पोट।
यी युवक साइकलिस्ट हुन्।
यो पढिरहँदा तपाईँलाई अनौठो लाग्ला, 'एउटा खुट्टा छैन तर साइकलिस्ट?'
कोठामा पस्दै गर्दा सोधेका थियौं, 'पढ्न डिस्टर्ब त हुँदैन?'
जस्ताले बारेर बनाइएको दोस्रो कोठामा खाट, बेन्च, सानो टेबल र एउटा ह्याङ्गर छ। सोफामा बस्न संकेत गर्दै खाटमा पल्टिए र बोले, 'हपहप् गर्मी छ। कसरी पढेर बस्न सक्नु? बेलुका शितल फर्किएपछि पढ्न थाल्ने हो।'
नाम : युवक लामा
हाल : ललितपुर
२०६९ सालको दशैं। काठमाडौं दशैंको माहोलले छपक्कै हुँदा उनी भने घरबाट टाढा थिए। साहुको छोराछोरी किनमेल र घुमघाममा रमाउँदा उनी भुईं पुस्दै हुन्थे नभए कोठा सफा गर्दै। गाउँको याद आकाशियो। स्कूल त उनको पनि बिदा भइसकेको थियो। तर, कामबाट बिदा दिएनन्। मुखै फोरेर बिदा माग्दा साहुले भने - दशैंमा झन् धेरै काम हुन्छ।
'होसमा आउँदा हस्पिटलमा थिएँ। किन त्यहाँ थिएँ चाहिँ पत्तो भएन। पछि सिरक हटाएर हेर्दा त एउटा खुट्टा नै थिएन,' उनले त्यतिखेरको अनुभव सुनाए, 'मलाई त म जन्मेदेखि यस्तै हुँ जस्तो लाग्यो। किनकि न मैले एक्सिडेन्ट सम्झें न काटेर फालेको खुट्टा नै।'
आमाभन्दा अघि नै उनको मृत्युको खबर पो आयो- 'स्याउला काट्न रुख चढेकी ठूलीकान्छी खसेर मरी।'
‘खुट्टा काटेर फालेको थाहा पाउँदा अब जिन्दगीमा केही गर्न सक्दिन भन्ने लागेको थियो। आमाको लास देखेपछि लाग्यो अब बाँच्न नै सक्दिन,' बोली सकेर आँशु पुसे र थपे, ‘मेरो मुटु कमजोर हुने आमालाई सम्झँदा मात्र हो। नत्र त यी (खुट्टा काटेर बाँकी रहेको भाग देखाउँदै) यहीँको मासुजस्तै जब्बर भइसकेँ।‘
'केही गर्न नसक्दा छट्पटी हुने रहेछ। रोगी बुबालाई भार भएजस्तो लाग्थ्यो,' उनी सुनाउँछन्, 'आफ्नो मात्र खुट्टा छैन। आफू मात्र एक्लो छु जस्तो लाग्थ्यो। सोच्दा सोच्दै कतिपटक त बरु मर्‍यो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो।'
'खुट्टा गुमाएको त्यत्रो वर्षपछि बल्ल हेपिनुको पीडा महसुस गरेँ। सार्वजनिक सवारी साधन त हामीजस्तो हात खुट्टा नभएकाका लागि होइन रै’छ भन्ने लाग्थ्यो। तर, के गर्नु चड्नै पर्थ्‍यो,' पीडा सुनाउँदा पनि मुस्काउँछन् उनी।
'अपाङ्ग सिट लेखेको सिट समातेर उभिनु पर्थ्यो तपाईं आफै सोच्नुस् कस्तो हुन्थ्यो होला?', उनको बोलीमा असन्तुष्टि झल्कियो, 'यो ठाउँमा मान्छेको मन नै हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो। तर, फेरि स्कूल पुग्थेँ। त्यहाँ सर मिस र साथीहरु भेट्थे। सबैभन्दा ठूलो मन भएका मान्छेहरु भेट्थेँ। गाडीमा हुँदा उठेको रीस मर्थ्यो।'
'खोइ देउ त म पनि साइकल चलाउँछु,' आफू रोएको थाहा नदिन बोले, 'अब म पनि साइकल सिक्छु। बसमा साह्रै गाह्रो भयो।'
त्यसपछि युवकलाई तान्न हात दिँदै भने, 'आउ म सिकाउँछु।'
२०७४ को जेठ महिना। घाम चर्किएको थियो। भृकुटी मण्डपमा 'वातावरण बचाऔं' लेखेको प्याम्प्लेट बोकेर बसेका थिए मानिसहरु। त्यही भिडमा थिए युवक पनि। साइकल चडेर पुगेका उनमा धेरैको आँखा पर्‍यो। त्यही भेटिए अर्जुन राना जसले उनलाई साइकल र साइकलिङसँग झन् नजिक पुर्‍याए। युवकको जोश, आत्मबल र साहस देख्नेर छक्क परेका उनले हार्टबीट नामक संस्थामार्फत् साइकल उपलब्ध गराउने भए।
'साइकल किन्ने पैसा थिएन। जब अर्जुन सरले साइकल दिने कुरा गर्नु भयो तब साइकलको रङ, साइज, डिजाइन अनुमान गर्न थालें। त्यो बेला मलाई साइकलको ब्रान्डहरु बारे त पत्तै थेन नि,' उनी खुशी सुनिन्छन्।
उनले कल्पना बाहिरको साइकल पाए- मोटाजी ब्रान्डको। करीब ४५ हजार बराबरको मूल्य पर्ने। 'सुरुमा त विश्वास नै लागेको थिएन। हातमै थमाएपछि चाहिँ दिदीले चलाउन दिनुहुन्न कि भन्ने डर थियो,' उनले भने। तर, त्यो डर धेरै दिन बाँकी रहेन।
'भाइ तिमीलाई स्पोन्सर भनेको के हो थाहा छ?,’ तिरकले सोधे।
‘मैले तिमीलाई केही दिए बापत् तिमीले पनि केही दिनुपर्छ भन्नुभयो,' युवकले सुनाए।
ठीक एक सातापछि युवक फेरी प्याङ्क बाइकको सोरुममा पुगे। भने, 'मलाई साइकल स्पोन्सर गर्नुभयो भने म तपाईंको पसलको प्रचारप्रसार गरिदिन्छु।'
'एउटै सही आफ्नै खुट्टामा उभिने भएँ। कमाउने भएँ। कहिले काही दिदीलाई खर्च दिने भएँ। चाहेको लुगा किनेर लगाउन सक्ने भएँ,' उनको बोली गर्विलो सुनिन्छ।
'कम्मरदेखि नै फिट गर्नुपर्छ। लगाएपछि गर्मी र पसिना सहन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले प्राय जाडो महिनामा र घरमा यता उता गर्दा लगाउँछु,' उनले छेउमा राखेको कृत्रिम खुट्टामा लागेको चोट देखाउँदै भने, 'अस्ति लगाएर कुकुर चराउन गएको थिएँ। अर्को पालुवा कुकुरसँग झगडा गर्‍यो। त्यही कुकुरले टोकेको हो। विचरा कुकुर प्र्याङ्कमा पर्‍यो।'
'हेर्नुस् यो संसारमा असम्भव भन्ने चाहिँ केही हुँदैन रै’छ। सम्भव बनाउन आफैमाथि विश्वास चाहिँ हुनुपर्‍यो। हाम्रो क्षमतालाई आफूले जति अरुले पत्याउन सक्दैनन्,' युवक भन्छन्।
अब प्यारा ओलम्पिकमा सहभागी हुने सपना देखेका छन् उनले। जसका लागि टन्नै टेक्निक प्राक्टिस, डाइट, साइकल र अरु सामाग्री चाहिन्छ। ती महङ्गा हुन्छन्, मासिक तलवले थाम्न नसक्नेगरी। 'मेरो लागि मात्र होइन मजस्ता धेरै छन् प्यारा ओलम्पिकमा देशको प्रतिनिधि गर्ने लक्ष्य लिएका। यस्तोमा सरकार सहयोग नभइ सबैको रहर रहरमै सीमित हुन्छ,' उनले भने।
उनी सम्हालिँदै बोल्छन्, 'यात्रा यहीँसम्मको मात्र चाहिँ होइन। लिड गर्ने हतार छैन। राइडको अन्तिममा रहे पनि परसम्म पुगुँ, त्यति भए पुग्छ।'